असंभव भन्ने केही पनि छैन – निक ब्युजेसिक को जीवनी | Khabar Sadan खबर सदन
Home जीवनी असंभव भन्ने केही पनि छैन – निक ब्युजेसिक को जीवनी
के तपाई सानासाना समस्याहरुबाट डराउनुहुन्छ के तपाई जिन्दगिमा मा कुनै यस्तोसमस्याको सामना गरिरहनुभएको छ जुन तपाईलाई पार गर्न असम्भव लाग्छ ? यदि यसो हो भने यो लेख हेरिसकेपछी तपाईलाई आफ्नो समस्या सामान्य लाग्न लाग्नेछ र भित्र बाटै एक आवाज आउने छ कि हो असम्भव भन्ने केही पनि छैन ।
सोच्नुहोस् यदि कुनै बच्चाको विकलाङ्ग (असक्षम ) जन्म भएको छ भने उसका बुवाआमालाई के हुन्छ भनेर अनुमान गर्न गाह्रो छैन । यस्तो अवस्थामा सबैजना निराश हुन्छन् र आफ्नो भाग्यलाई सराप्न सुरु गर्दछन ,त्यो बच्चाको जन्मको समयमा उसका बुवाआमाको पनि ठ्याकै त्यहि मनोदशा थियो । जुन उसको जन्म स्वस्थ भएर पनि उ पूर्णतया अपूर्ण थियो किनभने नत उसका हात नै थिए न त खुट्टाहरु नै । उस बच्चाको नाम थियो निक जसलाई आज विश्वले निक ब्युजेसिक (Nick Vujicic) को नामले जान्दछ ।
हो आज हामी सकारात्मक सन्सारमा तपाईंलाई निक ब्युजेसिक को बारेमा पुराको पुरा biography बताउँदैछौँ । एक यस्तो व्यक्ति जसको बारेमा विश्वाश गर्न गाह्रो छ ‘A man without limbs’ जो आज लाखौ हात खुट्टा भएका मानिसहरूको लागि प्रेरणाको महान स्रोत भएको छ ।
निक ब्युजेसिक को पूरा नाम निकोलस जेम्स ब्युजेसिक हो । निक को जन्म ४ डिसेम्बर सन् १९८२ मा अस्ट्रेलियाको मेलबर्नमा भएको थियो । उनका बुवा बोरिस्लाब ब्युजेसिक तथा आमा दूशा़का ब्युजेसिक मूलरूपमा युगोस्लाबिया सर्वियाका थिए र अष्ट्रेलियामा आएर बसेका थिए । अस्ट्रेलियमा बोरिस्लाब ब्युजेसिक एकाउन्टेन्टको रूपमा काम गर्न लागे र दूशा़का ब्युजेसिक बच्चाहरूको एक अस्पतालमा नर्स भइन् । जन्मदा टेट्रा अमेलिया सिन्ड्रोम को कारण निक का हात खुट्टाहरु पूर्णरुपमा हराइसकेका थिए ।
टेट्रा अमेलिया सिन्ड्रोम बाट पीडित यस समय पुरा विश्वभरि मात्र साथ जना व्यक्ति जीवित छन् जसमध्ये एक निक पनि हुन् । निक को जन्म भएको बेला जब नर्स ले उनलाई लिएर उनको आमाको अगाडि ल्याईन, उनले लिन त के हेर्नसमेत अस्वीकार गरिदिईन तर पछि आमाबुबा हरुले परिस्थितिलाई स्वीकार गरेर निकलाई हुर्काउन बढाउन लागे । निक को जन्मको समयमा उनको एउटा मात्र खुट्टाको स्थानमा केहि जोडिएका औँलाहरू मात्रै थिए । डाक्टरहरुले अप्रेसन गरेर निक को औँलाहरूलाई छुट्टाछुट्टै गरिदिए ताकि उनी उनको मदतले चिजहरु पकड्न , पुस्तकहरूको पाना पल्टाउन र अन्य महत्वपूर्ण कार्यहरु गर्न सकुन् । अहिले निक यता उता घुम्नको लागि इलेक्ट्रिक ह्वील चियर प्रयोग गर्दछन् । चाहे इलेक्ट्रिक ह्वील चियर बाट कही जान अथवा कम्प्यूटर-मोबाइल फोन लाइ प्रयोग गर्न निक आफ्नो औंलाहरुले नै सबै काम गर्दछन् । कल्पना गर्नुहोस् निकले यी सबै कुरा सिक्न र गर्नकोलागि कति हिम्मत जुटाउनु पर्यो होला ।
साथीहरु समस्याले त एक स्वस्थ राम्रो व्यक्तिलाई पनि तोडेर राखिदिन्छ । निक लाई अध्ययन गर्न , खेल्न र आफ्ना दैनिक काम गर्न धेरै समस्या हुने गर्दथ्यो । स्कुलमा केटाकेटीहरु पनि उनको खिल्ली उडाउँथे । यी सबै कुराहरू देखेर निराश र दुःखी भएर 10 वर्षको उमेरमा निक ले पानीको टब मा डुबेर आत्महत्या गर्ने प्रयास गरे तर उनका आमाबुबाको प्रेम र प्रोत्साहन ले उनलाई अगाडि बढ्न प्रोत्साहित गर्यो ।
कुनै समय आत्महत्या को प्रयास गर्ने वाला निक आज हामीलाई प्रेरित गर्दै भन्छन् । यदि तपाईंसँग चमत्कार हुन सक्दैन भने तपाई आफै एक चमत्कार बन्नुहोस् । निक का आमाबुबा हरु उनलाई हरहालतमा आत्मनिर्भर बनाउन चाहन्थे । सानै उमेरदेखि नै निक का आमाबुबाले उनलाई पानीमा पौडिन सिकाउन लागे ।6वर्षको उमेरमा उनलाई पञ्जा हरूको सहायताले टाइप गर्न सिकाउन लागे । विज्ञहरूको सहयोगमा उनीहरुले निक का लागि प्लास्टिक को यस्तो उपकरण बनाए जसको सहायताले निकले पेन्सिल , पेन समात्न र लेख्न सिके । निक का अभिभावकहरूले निकलाई विशेष स्कुल पठाउन अस्वीकार गरिदिए । उनीहरु चाहन्थे कि निक सामान्य स्कुलमा सामान्य केटाकेटीहरु सँगै पढून । यसमा धेरै कठिनाइहरु आए तर उनीहरुले हार मानेनन् । सामान्य केटाकेटीहरु सँग पढ्ने , लेख्ने र काम काम गर्नाले यो फाइदा भयोकि निक उनीहरु जस्तै काम गर्न लागे । पञ्जाहरूको सहायताले निक्ले पढ्न लेख्न त सिके नै साथै फुटबल , गल्फ र पौडी खेल्न पनि सिके निक पञ्जाको सहायताले नै , ड्रम मात्रै बनाउँदैनन् कि बरु माछा मार्ने , चित्रकला र स्काइ डाइबिङ सम्म गरिदिन्छन् । मुखको सहायताले गियर बदलेर निकले कार पनि सजिलैसँग चलाउँछन् ।
जब 13 वर्षका थिए निक एकदिन उनकी आमाले पत्रिकामा प्रकाशित एक लेख निकलाई पढेर सुनाईन जसमा एक विकलाङ्ग (असक्षम) व्यक्तिको संघर्ष र सफलताको कहानी थियो । निक लाई महसुस भयो कि दुनियाँमा उनी एउटा मात्र असक्षम होइन रहेनछन र परिश्रम र संघर्षबाट अगाडि बढ्न सकिन्छ । त्यसपछि उनको जीवनको दिशा नै परिवर्तन भयो । उनलाई यस्तो लाग्यो कि भगवानले उनलाई केही फरक गर्नको लागि नै यस्तो अवस्थामा राख्नु भएको हो । उनीलाई त आफैंलाई प्रेरणा र प्रोत्साहनको जरुरी थियो तर उनले संकल्प गरेकी उनी आफैंले मान्छेहरुलाई प्रेरणा र प्रोत्साहन प्रदान गर्नेछन् , ताकि मान्छेहरुमा व्याप्त निराशा र स्थिरता हटाउन सकियोस् र उनीहरु उत्साहपूर्वक काम गर्दै राम्रोसँग जीवन बिताउन सकुन ।
उन्नाइस वर्षको उमेरमा निक ले एक प्रेरक वक्ता रुपमा काम गर्न सुरु गरिदिए । ऐक्काइस वर्षको उमेरमा निकले अकाउन्टिंग वा फाइनान्समा ग्रेजुएशन गरे ।
२००५ मा उनले एक अन्तर्राष्ट्रिय गैर नाफामूलक संस्था life without limbs को स्थापना गरे । २००७ मा उनले एटिट्युड इज अल्टिट्युड नामबाट एक कम्पनी खोले र एक प्रेरक बक्ताको रुपमा काम गर्न लागे । २००९ मा उनले एक लघु चलचित्र बटरफ्ल्याई सर्कल बनाए जसको लागि उनलाई उत्कृष्ट एक्टरको अवार्ड दिइयो । यसैबीच २००८8 मा उनको प्रेरक भाषण सुन्न आएकी कानै मियाहारा क्यानइ मियाहरासँग उनको भेट भयो जुन प्रेममा परिणत भयो र २०१२ मा उनीहरु ले विवाह पनि गरे । बिना हातखुट्टा जन्मिएको उ बच्चा आज संसारकै सबैभन्दा प्रेरणादायी वक्ताहरु मध्येको एक हुन् । निकले ४० भन्दा बढी देशहरुमा आफ्ना कार्यक्रम गरिसकेका छन् । जुन बच्चा जन्मदा उस्की आमा सम्म उसलाई देख्न चाहँदैन थिइन् उसैलाई देख्न सुन्नको लागि आज हल खचाखच भरिएका हुन्छन् , एकपटक त उनको प्रेरक भाषण सुन्नको लागि एक लाख भन्दा बढी मानिसहरु उपस्थित भएका थिए र मानिसहरूलाई बस्न सम्मको लागि ठाउँ थिएन ।
निक हाल आफ्नी पत्नी र बच्चाहरूसँग क्यालिफोर्नियामा बस्दै आएका छन् र अत्यन्त सन्तुष्ट जीवन बिताइरहेका छन् , जो उनको सकारात्मक सोच र संघर्षकै परीणाम हो । जो जीवनमा साना-साना समस्याहरु सँग डराउँछन् र हार मानिहालछन् उनिहरु को लागि निक भन्दा ठूलो प्रेरणाको स्रोत को हुन सक्छ र ? साँच्चिकै भन्ने हो भने निक करोडौं संघर्षशील मानिसको लागि एक जीवित प्रमाण हुन् कि असम्भव भन्ने केही पनि छैन ।
साथिहरु हाम्रो यो सामग्री पढेर सुनेर यदि कुनै एक व्यक्ति को जीवन मा पनि परिवर्तन आउछ भने यो सामग्री सफल रहनेछ ।
Best Nepali Motivational Video By Positive Sansar
Biography in nepali language by positive sansarr
nepali heart touching lines
Nepali heart touching quote by positive sansar
Nepali Motivational Video/Speech By Positive Sansar
Nick vujicic biography in Nepali
Overcoming hopelessness Nick Vujicic In Nepali
Positive Sansar In Nepali
some fact lines in nepali
Previous articleसबैभन्दा ठुलो जोखिम कुनै पनि जोखिम नलिनु हो
Next articleअधुरोपन जरुरी छ जिउनको लागि
जिबन बदल्ने केही प्रेरक लाइन संग्रह चौथो
१. यदि ईश्वर पाउन चाहनुहुन्छ भने काम पनि त्यस्तै गर्नुहोस् जसले ईश्वर बनाई दिने गर्छ तब मात्र ईश्वर संग ईश्वरको मिलन हुन्छ। २. सफलता न...
ओशो, उनी आध्यात्मिक गुरु मात्रै थिएनन् । उनी एक क्रान्तिकारी सोचका धनी पनि थिए। उनको जन्म सन १९३१ डिसेम्बर ११ का दिन छिमेकी देश...
यथार्थ मन छुने लाइनहरु संग्रह तेह्र
१. यतिधेरै बफादार नहुनुहोस् कि मान्छेहरु तपाईलाई कुकुर सम्झीउन ... २. आफ्नो क्षमतालाई यत्ति धेरै बढाउनुहोस् कि तपाईंलाई हराउनको लागि कोशिस होइन षड्यन्त्र गर्न परोस...
यथार्थ मन छुने लाइनहरु संग्रह सत्र
१. औकात सोच बाट बन्दछ पैसाबाट होइन ... २. एक हजार राम्रा काम गर्नुहोस ... र फेरी एक गल्ती गर्नुहोस् ... मान्छेहरु सबै बिर्सन्छन् फेरि...